HTC 10 wuxuu noqon doonaa kii ugu horeeyay ee Android ah ee la jaan qaada AirPlay | Wararka IPhone
HTC 10 wuxuu noqon doonaa kii ugu horeeyey ee Android la jaan qaada AirPlay si rasmi ah
Wax badan ayaa la sheegay maalmihii ugu dambeeyay ee HTC 10, qalab heer sare ah oo ka socda shirkadda caanka ah. Nasiib darrose HTC ma guranayso dhammaan guulihii ay u qalantay, wax yar ayey jidka ka socotaa, laga yaabee sababtoo ah ma aysan awoodin inay sameeyaan sida ugu wanaagsan ee ay u faafiyaan sida Samsung iyo LG, taas oo macnaheedu uusan ahayn in qalabkoodu xun yahay, dhab ahaantii waxay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan oo leh tayo dibadeed oo ay adag tahay in lala simo aaladaha kale ee ku shaqeeya nidaamka hawlgalka ee android. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in HTC 10 uu noqon doono qalabkii ugu horeeyay ee Android ah ee si rasmi ah u taageera AirPlay.
Haa, horeyba waan u ognahay inay jiraan codsiyo badan oo dhinac saddexaad ah oo sameeya tiro cayiman oo ah aaladaha Android ee la jaan qaada oo la jaan qaadaya AirPlay, laakiin illaa iyo hadda ma aanan helin koox ay qalabkeedu si buuxda u waafaqsan yahay uguna habboon yahay tiknoolajiyadan gudbinta Apple. HTC dhab ahaantii waxay Apple ka bixinaysaa rukhsadaha isticmaalka rasmiga ah ee loo yaqaan 'AirPlay', sidaa darteed waxaan u adeegsan karnaa sidii inay tahay qalab Apple ah. Tani kaliya kuma eka Apple TV, tusaale ahaan, maaddaama ciyaartoy badan oo maqal ah ay sidoo kale la jaan qaadi karaan AirPlay.
Hadda waxaad u isticmaali kartaa HTC 10 inaad ku shubato codka qalabkan AirPlay-ku habboon. Intaas waxaa sii dheer, waxay adeegsadeen qaab xiriir gaar ah, haddii aad sedex farood hoos ugu rogto shaashadda AirPlay ayaa isku xiri doonta, waa xalka cajiibka ah ee aad u hal-abuurka badan. Waxaan rajeyneynaa in HTC ay ugu dambeyn heli doonto sumcadda ay ugu qalanto suuqa taleefannada gacanta, shirkad saacado yar gudahood sababta oo ah ma aysan awoodin inay iibiyaan sidoo kale Samsung ama LG in kasta oo xaqiiqda ah in sanado badan ay sameynayeen koox si cad uga sarreysa kooda, marwalba cusbooneysiin iyo adeegsiga qalabka ugu tayada sareeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » HTC 10 wuxuu noqon doonaa kii ugu horeeyey ee Android la jaan qaada AirPlay si rasmi ah
Apple wuxuu ka saarayaa barnaamijyada 'Reddit-saddexaad' barnaamijyada 'App Store' xulashada NSFW
Facebook Messenger waxay horeyba noo ogolaatay inaan faylasha ka dirno DropBox